Ụbọchị My Pet » Aghaghị Nkịta : New Leash On Life
emelitere ikpeazụ: Oct. 14 2020 | 6 min agụ
My nwanne Michael na-anọ na m ruo mgbe ya na nwunye ya wee azụ na egwu.
“Ọ bụghị na ị Michael coddle ya, Sarah,” nna m wee sị. “Nanị nye ya atọ n'ámá a ụbọchị na-eme ka ji n'aka na ọ nwere a starched uwe ọcha-eyi gaa ụlọ ọrụ.”
“Ọ bụrụ na ọ nke ukwuu dị ka ese a biya karama, zoo ya cell ekwentị,” nwanne m nwaanyị Carol sịrị. “Emela, n'okpuru ọnọdụ ọ bụla, ka ya mmanya na-egbu ikpo Phoebe. Ọ bụ amoosu na isi obodo B mgbe ọ lụrụ ya, na ọ ga-a ngbasi na isi obodo B mgbe anyị na-ahụ ya ndochi.”
“Gịnị mere Michael-anọ na ụlọ gị?” nwanne m nwaanyị Christine kwuru. “Anyị nwere ọtụtụ ụlọ, na ọ dịghị iwe, ma ọ bụ otú adịghị mma otú i mgbe niile nwere hog ya.”
Mgbe ọnwa, ma eleghị anya, afọ, nke na-anwa ijide ya na nwunye ya ọnụ mgbe o bi n'ụlọ, Michael olileanya na-anọghị ga, n'ezie, ka Phoebe obi na-eto eto fonder. Ya mere, ọ kwagara ma ugbu a ọ na-akwọrọ ya ndinyom, Annie na Lainie, ka Irish nzọụkwụ egwú na Wednesday mgbe ụlọ akwụkwọ ma were ha si ka nri abalị mgbe e mesịrị. Ha na-nọrọ ngwụsị izu ọ bụla na ya.
“Olee ogologo oge ị na-eche na ọ ga-?” John Anderson mesịrị jụrụ. Nke a yiri ihe ezi uche ajụjụ si nwoke ahụ na-m ịrịba ama ndị ọzọ.
“Ọ ruo mgbe hell freezes n'elu iyi kwa pessimistic?” M zara.
Mgbe a bumpy mmalite mmekọrịta anyị, John na m na-akọrọ ọnwa isii nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bliss. Anyị bụ ndị na now ihu ọma na ejidere. M na-eche mgbe ụfọdụ na n'etiti abalị ma ọ bụrụ na anyị ga nweworo ezu bliss ihe iji nweta site na nke a. Ma ka bliss nwere a adị ndụ? Ọ ga-ekubi ume nke nleghara anya tupu anyị ịkwanye ọkụ ọzọ na a mgbe nile?
Tonight, nwanne m nwoke Michael na m nọ na ụkwụ azụ ndina m. A izu uru nke starched na-acha ọcha Chiefs na akọrọ ihicha akpa ndị yiwere m igwe ịgba ọsọ. Abụọ efu Sam Adams biya karama flanked a ọkara eri cheese Pizza na tebụl kọfị. M bụ ezigbo nwanne.
“Nice,” Michael kwuru.
“N'ihi,” M kwuru.
N'ime izu ụka, Michael na Annie na Lainie na m kwaturu m esi n'ákwà ochie n'uko akwa mgbago na-arahụ na a ichu nta n'ihi na ụmụaka. My ọzọ abụghị gabiga ókè mmasị na ncheta nke m bụ nwata na ndị azụ n'ala ma furu cell ekwentị egwuregwu n'oge na-adịghị. O doro anya na nwanne m nwoke obi ma, n'ihi na ugbu a ọ na-egwuri egwu m eto onyeisi ụgbọ nwa bebi.
“Ọ bụ abụọ nwa bebi na otu, n'ihi na ugboro abụọ ka ukwuu fun!” M na-agụghachi m peppiest eṅomi 1970 azụmahịa.
Onyeisi ụgbọ bụ Barbie si obere nwanne. Dị ka Doublemint anyị nwata ahụ e touted dị abụọ, abụọ, abụọ mints ke kiet ke otu, a version nke onyeisi ụgbọ n'ezie bụ abụọ nwa bebi na otu. Mgbe mbụ ị hụrụ ya, ọ pụtara ga-abụ a ụtọ nta blond akwụkwọ elementrị amụrụ. Ma ọ bụrụ na ị na-agba gburugburu ya ekpe ogwe aka azụ, ọ n'ezie toro ara nri n'ihu gị anya.
Dị ka ọ bụrụ Barbie si ekwe omume ahu bụghị screwed m zuru m na-etolite etolite. N'ihi-eto eto Up onyeisi ụgbọ, M ga-nọrọ dịkarịa ala otu afọ m prepubescent ndụ circling m n'aka ekpe ogwe aka azụ dị ka a onye na-njikere backstroker mgbe m na-egbu ikpere n'akụkụ àkwà m asị m nightly ekpere. Mgbe na-arịọ Chineke ka ọ gọzie mama m na papa m na m nwoke atọ na ndị nwanyị abụọ na ndị niile na agụụ na-agụgbu ụmụ China, Ekpere m ekpere maka ara, ibu karịa nwanne m nwaanyị Carol si, bụ onye na-afọ abụọ okenye na, atọ Chineke ụtọ, bịarutere n'ihu m iri na asaa na-ọnwa tọrọ nwanne Christine gosiri elu.
“Anyị garịrị eme ya, anyị garịrị eme ya, anyị ga-amụba anyị na na,” Michael kwuru n'akụkụ m ndị a niile afọ mgbe e mesịrị ka o pumped-eto eto Up onyeisi ụgbọ ekpe ogwe aka na ala. Ara ya pụtara na okụrede zuru okè oge ya chant.
“Kụrụ aka ya,” M kwuru. M ruru n'ihi na m ochie nwa bebi.
Michael yanked ya pụọ. “Ònye bụ agbarapụ-eme ka m?”
“Nye ya m,” M yelled ka m lunged maka onyeisi ụgbọ. Old àgwà anwụ ike na ihe niile, ma ọ dị ịtụnanya n'ezie ụzọ m na ụmụnne m na ụmụnna nwanyị na m nwere ike-aghọ anyị nwata selves na a nanosecond.
A dara ụda ogbugbo mere ka m na-awụlikwa elu. Mama Teresa, Michael si humongous St. Bernard, bụ onye nọkwa na-anọ na m ruo mgbe Phoebe Agbaghara ya ma ọ bụ ruo mgbe hell froze n'elu, jidere-eto eto Up onyeisi ụgbọ.
Etiri m mkpu.
Michael jumped ya ụkwụ. “Mama Teresa, idebe ya.”
Mama Teresa ẹkenịmde onyeisi ụgbọ-ekpe na ogwe aka n'etiti ya ezé ka ọ kwara ya isi na ụfọdụ oge ochie na-eri anụ-egbu ememe ọ bụghị nnọọ ghọrọ usoro karịrị. The nwa bebi n'obi pụtara na okụrede na onye ọ bụla shake.
M efehe aka kichin na jidere doggie emeso ite. M mere a ọkpụkpụ ekara bisikiiti.
Mama Teresa pụtara ịkpọlite ​​onye nkuanya.
M na-etinye mbụ na-emeso n'ala wee a abụọ otu onye si ite.
O nyere eto onyeisi ụgbọ ọzọ shake.
“Ezi,” M kwuru. “Ma ịdọ aka ná ntị, M na-eru na akara na atọ.”
Nne Teresa dọba eto onyeisi ụgbọ nwayọọ n'ala na anakọtara ya atọ emeso.
“Ezi girl,” Michael kwuru.
“Ọ bụ debatable,” M kwuru. M na ekemende m drool-kpuchie nwa bebi na malitere ikpochapụ ya na m jeans. M Reconsidered na jidere a Pizza nweta akwa nhicha.
“Ebe A, Aga m na,” Michael kwuru.
M nyefeela-eto eto Up onyeisi ụgbọ na ị nweta akwa nhicha na plopped ala na n'ihe ndina.
Michael okokụre ejiji-eto eto Up onyeisi ụgbọ ma azụ rhythmically pumping ya ekpe ogwe aka.
M maara na ọ bụ a mkpu enyemaka. M ghọtara m nwanna nwanyị ọrụ. M ga-esi uche ya anya eto onyeisi ụgbọ, mgbe ahụ, m ga-esi ya n'uche anya Phoebe. M ga-enyere ya aka na-aghọta ya alụmdi na nwunye ahụ na-enyere aka ya na navigating ya alụkwaghịm mgbe na-agbalịsi ike na-enwe mmetụta dị njọ Annie na Lainie ka a iferi kacha nta. Ma mgbe ahụ, m ga-ahụ ya a kwesịrị ekwesị karị egwuregwu. Ozugbo m nwetara na niile nhata pụọ, John Anderson na m ga-agba ịnyịnya gaa n'ime blissful anyanwụ dara ọnụ.
“Echere m na m ga-abịa ya na,” Michael kwuru. “Ị chọrọ ka m na-mama Teresa otu oge, ma ọ bụ ị pụrụ ya n'ihu gị isi gawa bed?”
Mama Teresa leaned n'elu na lapped m agba. M asụwo ude. “Aga m ewere ya.”
Michael nyere a mwute ọkara ife. “G'night, Sarah. Night, Mama Teresa.”
O weere otu obi ụtọ usio guestroom.
“Michael,” M kwuru.
Ọ tụgharịrị. Na-eto eto Up onyeisi ụgbọ e kuuru na ogwe aka ya.
M na-enwe aka m. “Nye m nwa bebi, Michael.”
M nọdụrụ n'ebe a mgbe, ọkọ mama Teresa na ọhụrụ ya ebe kasị, nri n'azụ ya ekpe ntị. Mgbe ahụ, m wee bilie wee jiri nwayọọ nwayọọ m bụbu nna ya ukwu ime, nke ga-amasị m ghọọ ihe ụlọ ọrụ na ebe m na-arụ ọrụ na oru na echekwara mmezi m ihe na klas.
M rummaged site a ikpo scrapbooks na ala shelf. M wetara m agbamakwụkwọ album, dusted ya otu aka, ẹkenịmde ya maka oge. M mechie anya m na-agbalị hụ Kevin, m na mbụ di. All m nwere ike conjure e a na-edochaghị anya oyiyi nke a nwoke nọ ọdụ a mposi oche, isi ya na-ezo n'azụ akwụkwọ akụkọ, ya ogologo ọkpa gburugburu ya nkwonkwo ụkwụ, na-asa ahụ ụzọ oghe. M na-eche ma ọ bụrụ na Kevin na-agụ ya ụtụtụ na ozi ọma na ihe iPad now.
N'ikpeazụ, M hụrụ ndị ji akwụkwọ ga-amasị m na-mgbe m na-navigating mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha. A na peeji nke nke ọ bụla n'ime m ụbọchị, gosiri na aka na-adọkpụ kpakpando na flags. N'ihi ya, ọtụtụ red flags billowed gafee n'elu na peeji ndị na o yiri a ire na a ụgbọala dealership. George si Hanover, onye na-achọ a mmekọrịta otu ụbọchị a ọnwa, ọ dịghị ndido urụk, ọ dịghị nkwa. Aga M, onye na-eto ya alfalfa pulite. The Ihọd achọ a gbakwunyere-sized Nwanyị, onye m ga-eji nkenke oge atụle obere n'ihi na m mmasị n'ụzọ ọ capitalized Nwanyị, ma ukwuu n'ime n'ihi na m nwere ike iri a otutu. Ray Santia, bụbu fọrọ nke nta hockey kpakpando m na-fọrọ nke nta ede na. Bob Connor, a na-amụrụ nna m ekwesịghị ede na.
Ọ bụ a ọhịa si n'ebe. Ogbenye Michael. Ma ọ bụrụ na m ga-esi ya nke ụlọ m na ya ụtọ ụzọ, tupu m maara na ọ na m nwere ike na-azụ si n'ebe m.
Akwụsịtụrụ m maa jijiji na echiche. Mgbe ahụ, m chọpụtara na ndị onye ad nwanne m nwaanyị Carol ama enịm m, taped n'ime center nke a na peeji nke.
Voluptuous, sensuous, alluring na fun. Sonso 40 DWF achọ pụrụ iche nwoke ịkọrọ starlit ehihie na abalị. Ga-ahụ n'anya nkịta.
M na-ebu m mkpakọrịta nwoke na nwaanyị akwụkwọ si na ndụ ụlọ, tinyere ọkacha mmasị m red pensụl. M tụgharịa ka a ọhụrụ mahadum-lined na peeji nke na tapped na Nchicha megide m ezé mgbe m tweaked na mgbasa ozi ahụ ka ona nwanne m nwoke.
Buff, amamiihe, gbajiri ma ọ bụghị mmekwata. Mara mma n'oge na-adịghị ga-DWM ya nile ntutu na-achọ pụrụ iche nwaanyị ndị osobo ụmụ ya’ ụkpụrụ ndị dị elu. Ga-ahụ n'anya nnukwu slobbery nkịta.
(Biri na ikike n'aka Claire Cook si ọhụrụ akwụkwọ 'Aghaghị Nkịta – New Leash On Life’ – akwụkwọ 2 nke kacha mma n'ire Aghaghị Nkịta usoro. I nwere ike ịchọpụta ihe banyere Claire na akwụkwọ ya na www.clairecook.com)